Kungani futhi Ungayisetha Kanjani i-Akhawunti ye-Gravatar | Martech Zone
Kungani futhi Ungayisetha Kanjani i-Akhawunti ye-Gravatar
NgoMgqibelo, July 18, 2015 NgoLwesithathu, July 22, 2015 Douglas Karr
Ukuphela kokukhulisa igunya nokwenza ngcono ukulinganiswa kwenjini yokusesha ukuthola ukubalulwa kumasayithi afanele mayelana nesayithi lakho, umkhiqizo, umkhiqizo, insizakalo noma abantu. Ochwepheshe bezobudlelwano bomphakathi bafaka lezi zingxoxo nsuku zonke. Bayabona ukuthi ukutholela amaklayenti abo ukunakwa okushayela ku-inthanethi lokho kwaziwa komkhiqizo. Ngezinguquko ze-algorithm, futhi kuyisu lokuqala lokuthuthukisa ifayela lakho le- amazinga wegama elingukhiye ezinjinini zokusesha.
Ngezinye izikhathi, asinalo ithuba lokuxoxa noma ukubhala ngemikhiqizo kodwa iphimbo lihle kakhulu kangangokuba simema uchwepheshe we-PR ukuthi iklayenti labo libhale okuthunyelwe kwabavakashi. I-athikili imvamisa iyingxenye elula yalokhu kuhlanganyela, izinkampani zizimisele kakhulu ukunikeza i-athikili. Sibeka izidingo ezithile kubo:
Zama ukugcina okuqukethwe phakathi kwamagama angama-500 kuya ku-1,000 XNUMX.
Chaza inkinga abanayo abakhangisi bese uzama ukunikeza izibalo ezithile ngezinsizakusebenza ezisekela isisekelo.
Nikeza ngemikhuba emihle kakhulu ekuxazululeni inkinga.
Uma unesixazululo sobuchwepheshe, nikeza imininingwane yokuthi sisiza kanjani.
Faka phakathi izithombe-skrini, imidwebo, amashadi noma - ikakhulukazi - ividiyo yesixazululo.
Asidingi umnqamulajuqu, kepha sazise ngentuthuko.
Bhalisa umbhali nge I-Gravatar futhi usinikeze ikheli le-imeyili lombhali ababelisebenzisa ukubhalisa.
Umbhali uzongezwa encwadini yethu yezindaba futhi angaxhumana naye ngqo ukuze alandelwe. Uma okuthunyelwe kuthandwa, singenza ne-podcast mayelana nesihloko.
Ukubhalisa umbhali nge-Gravatar kubalulekile ukuze they ingalawula isithombe esiboniswe kuphrofayela yabo yombhali. Ngaphandle kwawo, besizocelwa njalo buyekeza izithombe zombhali futhi asifuni ukuphatha lokho. IGravatar iyinsizakalo elula futhi inesifiso esihle sokuyisebenzisa ukuze babe nomfanekiso obonakalayo kuyo yonke iwebhu - hhayi kusayithi lethu kuphela.
Kusuka kuwebhusayithi yeGravatar:
"I-avatar" isithombe esimele wena ku-inthanethi — isithombe esincane esivela eceleni kwegama lakho lapho uxhumana namawebhusayithi. IGravatar iyi- I-Avatar Eyaziwa Emhlabeni Wonke. Uyayilayisha bese wenza iphrofayili yakho kanye nje, bese kuthi lapho ubamba iqhaza kunoma iyiphi indawo enikwe amandla yi-Gravatar, isithombe sakho seGravatar sizokulandela ngokuzenzakalela lapho. IGravatar iyisevisi yamahhala yabanikazi besayithi, abathuthukisi nabasebenzisi. Ifakwa ngokuzenzakalela kuwo wonke ama-akhawunti eWordPress.com futhi iqhutshwa futhi isekelwa yi- Automattic.
Kungani Sisebenzisa i-Gravatar?
Abantu bavame ukushintsha izithombe zabo zephrofayili kumasayithi abo ezokuxhumana. Bangashintsha izitayela zezinwele, noma babe nezithombe ezintsha, zobungcweti ezithathiwe. Uma ubhale i-athikili yokushicilelwa, basibuyekeza kanjani isithombe sakho sibe samuva nesikhulu? Impendulo ithi I-Gravatar.
Ku-WordPress, isithombe sombhali sitholwa ngentambo ebethelwe ye-imeyili yombhali. Ikheli le-imeyili lombhali aliboniswa esidlangalaleni. Futhi i-akhawunti yeGravatar izokuvumela ukuthi uphathe amakheli ama-imeyili amaningi ku-akhawunti, ngezithombe eziningi.
Tags: umbhaliiphrofayela yomlobiavatari-gravatar
Usilika: Guqula Idatha NamaSpredishithi Kube Ukubukwa Okushicilelwe
I-Oct 17, i-2007 ku-10: i-59 PM
Uma ubona le Gravatar noma ikuphi kuwebhu, yimi!
Okthoba 18, 2007 ngo-4: 20 AM
Angisebenzisi iGravatar kepha kunalokho ngisebenzisa i-MyAvatar eyi-plugin yeWordPress.
Lokhu kuvumela into efanayo ukuthi yenzeke kepha kungenxa yokuthi i-avatar ekhonjisiwe izofana naleyo eku-MyBlogLog.
Lokhu kunciphisa izinto eziningi ngoba abafundi abaningi ngeke bathathe isinyathelo esingeziwe sokulayisha i-avatar yokuqhafaza. 🙂
Okthoba 18, 2007 ngo-11: 35 AM
Ngiyawathanda ama-gravatars futhi ngiyajabula ukuthi bawungenisile. Ngethemba, kuzobonakala sengathi kuhlanganiswe ku-wordpress version elandelayo…
Kukhona ukubuyekezwa okuhle kwama-gravatars ku- http://www.thetechbrief.com/2007/10/12/get-yourself-a-gravatar-while-theyre-still-hot/
Okthoba 19, 2007 ngo-12: 12 AM
Futhi manje isevisi yamahhala ngokuphelele - engeza ama-avatar amaningi nama-id we-imeyili owafunayo 🙂
Ngempela ngidale isigaba seGravatar uma uchofoza isixhumanisi egameni lami. Kuhlanganiswe ngokukhululekile futhi kusebenza njengephupho - futhi inenqolobane enedethi yokuphela kwesikhathi ye-avatar - yokonga ezikhathini zokulayisha. Ingamane ilayishe i-avatar endaweni yangakini.
U-Adam @ I-TalkPHP.com